Nezvedu-Kicheni Faucets, Pot Filler Faucets, Bathroom Faucets | WOWOW
musha / Nezvedu
KuWOWOW, isu tinotenda kuti iwe unofanirwa zvakanakisa. Sechikamu chekurudziro yedu yekutanga kuuya, unonzwa kunge wehumambo.
Sezvo tanga tiri mumusika kubva 2008, kambani yedu yemubereki yagara ichiedza kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kwemakore, isu nekuchenjerera uye nemaune takawedzera yedu yekuunganidza kusanganisira zvese zvatinogona zveimba yako:
• Kicheni zvishongedzo: mapombi ekicheni uye zvigadzirwa zvemazuva ano, zvakagadziriswa uye zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro. Dhonza pasi mapombi ekicheni anosangana nezvinodiwa zvemhuri zvazvino uno mukuita pamwe nehunyanzvi mukugadzirwa kwakarongeka.
• Bathroom accessories: Isu tinotora iyi yakafanana nyanzvi uye toishandisa kune chero uye yekugezera zvakare. Kubva pamidziyo yemabheseni kusvika kuimba yekugezesa senge thaulo racks uye zvimbuzi mapepa ezvimbuzi kune yakazara yakazara nyanzvi yekugezesa system, zvese zvinopihwa mune fomu raunoda.
Isu tinogadzirisa semaitiro edu emakona emabatiro anoita. Kuti ugone kugovera zvaunoda, tichagara tichiita zvatinokwanisa kugadzira mapepa akanaka kwazvo, zvigadzirwa zvemidziyo, uye zvese zvemidziyo yakanaka, zvese uchiri kuchengeta mutengo wakaderera mutengo kuitira kuti iwe ugokwanisa kuwana chairo izere.
Wakagadzirira kuita WOWOW yako yekuenda-kune hub kune nyanzvi yemhando yepamusoro pombi vagadziri? Taura nesu nhasi ku [contact info] uye tanga rwendo rwako.
* Ndezvipi zvinokufadza iwe zvaunofarira: kicheni chigezero washing
* Zvinodikanwa.Ndokumbira zadza iro ruzivo iwe rwaunoda kuziva senge zvigadzirwa zvigadzirwa, mutengo, MOQ, nezvimwe.